Ankify – Nosy be Efa niverina ny fifamoivoizana an-dranomasina
Nisokatra nanomboka omaly alarobia 12 aogositra ny seranan-tsambo ao Nosy Be. Na izany anefa dia tsy maintsy manaraka ny fepetra rehetra napetraky ny Fitondram-panjakana ny rehetra
Antananarivo Hiverina hiasa ny taksibe ?
Mandeha ny siosion-dresaka fa mety hiverina hiasa ny taksibe amin’ny herinandro ambony. Nambaran’ny fitondram-panjakana fa ny fitateram-bahoaka no isan’ny tena nampiparitaka ny valanaretina betsaka coronavirus, izay somary miteraka adihevitra ihany hoe:
faritra SAVA, raha ny fanapahan-kevitry ny governoran’ny faritra ao an-toerana, Tokely Justin, sy ireo tompon’andraiki-panjakana miara-miasa aminy ny faran’ny herinandro teo. Efa niteraka resabe ny fandrenesana fa tsy isan’ireo hisitraka izay tetikasa izay ity distrika ity saingy tapaka, araka izany, fa hahazo ny anjarany ihany koa ny ao Andapa ao. Taorian’ny tsanga-tanana dia voatsinjara fa atao rarivato ny 1,5 kilaometatra mampitohy an’i Antangena sy Betsakotsako. Toy izany koa ny 1 kilaometatra mampitohy ny tranompokonolona sy Andapa atsimo. Tsy marina noho izany ny filazana fa tsy isan’ny hisitraka ity tetikasa lalana rarivato mirefy 10 kilaometatra ity i Andapa, raha ny fampitam-baovao voaray hatrany.